Homeopharma : Vokatra “Bio” vita Malagasy -
AccueilSongandinaHomeopharma : Vokatra “Bio” vita Malagasy
Homeopharma : Vokatra “Bio” vita Malagasy
12/02/2018 admintriatra Songandina 0
Maro amin’ireo Malagasy no efa liana mitsabo tena sy mampiasa ny vokatra tsy ahitana fangarony, fa kosa ara-boajanahary tanteraka, toa izany koa ireo mpitsabo ankehitriny no mandrisika ny marary hanaraka izany fitsaboana bio izany. Ny fitsaboana ara-boajanahary tokoa mantsy dia tsy ahitana tranga faharoa, na ilay antsoin’ny vahiny hoe « effet secondaire », ary eo noho eo tokoa ny vokatra azo avy amin’izany fitsaboana izany. Manana orinasa iray izay efa fanta-daza maneran-tany isika amin’izany, ary manana ny toerany tanteraka raha io vokatra bio io no resahina, tsy iza izany orinasa izany fa ny homeopharma. Ny vokatra izay vokarin`izy ireo tokoa dia vokatra vita amin’ny ravina avy eto an-toerana, izay natoraly zato isan jato, ka tsy ahitana fangarony hafa. Ao ireo efa nahazo tombontsoa sy fahasitranana nampiasa ireo vokatra vitan’ny homeopharma ireo, misy koa ireo izay manaraka fitsaboana hentina hitezaina vatana toa ny fiakaran ny tosi-dra.
Noho izany, ankoatran’ ny marary izay mahazo tombontsoa dia eo ihany koa ny tombontsoan’ny firenena amin’ny fananana io orinasa vita malagasy io, satria raha ny fantatra amin’ izao fotoana izao, dia efa maro ireo teratany vahiny any ivelany no mitsabo tena amin’ny alalan’ny vokatry ny homeopharma. Ny fidirana amin’ny sehatra iraisam-pirenena amin’ny fanondranana ny vokatra homeopharma no hirariana.
Ankoatra izay dia maro ny vokatra vokarin’ny homeopharma, izay zato isan-jato bio, no efa be mpampiasa ankehitriny satria dia tsy ela ny vokatra. Anisan ‘izany ohatra ny vahona, satria dia ankoatran’ny fanasitranana azo avy aminy, dia eo ihany ko ny fitezaina ny vavony. Tsy ny vahona ihany anefa, fa eo ihany koa ny fanafody fitezaina ny tosi-dra izay natoraly tanteraka, ary azo tsapain-tanana tsara ny soa azo avy aminy. Reharehan’i Madagasikara tanteraka ny fananana ity orinasa tena malagasy ity, satria dia isika eto an-toerana sisa no manana izay vokatra tena natoraly izay. Ireo izay hampiasa ny vokatra homeopharma kosa dia efa misy ireo mpitsabo manerana ny tobin’ny homeopharma, manao fizahana ara-pahasalamana, ary manome ihany koa toro-hevitra mikasika ny fampiasana izany vokatra vita malagasy tanteraka izany, ary reharehan’ny Malagasy ihany koa.
Maro ireo tahirintsary sy horonam-peo ary ampamoaka raha tsy hiresaka afatsy ny fanambarana nataon’ny kolonely Charles Randrianasoavina, nahafahana nanokatra fanadihadiana lalin-dalina kokoa mikasika ny raharaha 7 Febroary 2009 saingy… Tsotra ny antony, fitsaran’ny mpandresy hatrany ...Tohiny
Krizy nentin-dRajoelina : Tanora 500 000 very asa